Sawirro: R/W Rooble oo xaal-mariyey QALBI-DHAGAX - BANAADIRSOM
Home WARARKA MAANTA Sawirro: R/W Rooble oo xaal-mariyey QALBI-DHAGAX
Muqdisho (Banaadirsom) – Halgamaa Cabdikariim Sheekh Muuse (Qalbi Dhagax) ayaa galabta kasoo dagay magaalada Muqdisho, ayada oo si weyn loogu soo dhaweeyay garoonka diyaadaha ee Aadan Cadde, afar sano iyo bar kadib markii cadowga loo gacan geliyey.
Halgamaa Cabdikariin Qalbi Dhagax ayaa waxaa goordhoweyd xafiiskiisa ku qaabilay Ra’iisul Wasaare Maxamed Xuseen Rooble, isaga oo ka xaalmariyay gabood-falkii lagula kacaya isaga iyo ururkii uu ka tirsanaa ee ONLF.
Ra’iisul Wasaare Rooble ayaa Halgamaa Qalbi Dhagax huwiyay calanka jamhuuriyadda, guddoonsiiyayna billad.
Sidoo kale waxa uu shacabka Soomaaliyeed uga mahadceliyay sida ay u garab istaageen, muwaadinkan Soomaaliyeed ee sida gardarrada ah loogu gacan galiyay dal shisheeye.
Xasan Cali Kheyre oo xukuumaddiisa ay dhiibtay Qalbi-Dhagax iyo madaxweyne Farmaajo ayaa labaduba hadda doonaya in madaxweyne loo doorto.
Previous articleCabdikariin Qalbi Dhagax oo kasoo dagay Muqdisho
Next articleAadan Madoobe oo soo saaray farriin cusub oo ku socota xildhibaanada